Home Child Teaching ကလေးငယ်တွေ ဇွဲလုံ့လရှိစေဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရင်းများ
စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ ဇွဲရှိခြင်းသည် ဘဝရဲ့ ကဏ္ဍအားလုံးတွင် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် လူတိုင်းထားရှိသင့်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့အရည်အသွေးတခုဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများသည် တစုံတခုကို စတင်ပြုလုပ်ချိန်မှာ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ တက်ကြွမှုတွေရှိတတ်ကြပေမယ့်လည်း အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမျိုးမှာ စိတ်အားထက်သန်မှုတွေမရှိကြတော့ဘဲ အဖျားရှူးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့လူတော်တော်များများဟာ နတ်ရေကန်ထဲခုန်ချလိုက်သလို အောင်မြင်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊ ကျရှုံးမှုတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ပြီး သူတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကို ဇွဲရှိရှိလျှောက်လှမ်းကြလို့သာ အောင်မြင်တဲ့လူတွေ၊ ကျော်ကြားတဲ့လူတွေအဖြစ် နာမည်ကောင်းရရှိကြတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ ဇွဲလုံ့လရှိစေဖို့ကို ငယ်စဉ်ကတည်းက အကျွမ်းတဝင်ရှိနေစေဖို့လိုပါတယ်။
ဇွဲလုံ့လရှိမှုဆိုသည်မှာ တစုံတခုကို ပြုလုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီဆိုပါက မဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တတ်သော၊ ဖြစ်မြောက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေတတ်သော၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့အတွက် မယိမ်းယိုင်ဘဲ တသမတ်ထဲလျှောက်လှမ်းတတ်တဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုးကို ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇွဲလုံ့လရှိတဲ့လူတွေသည် သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်များနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားချမှတ်တတ်ကြပြီး ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးကိုမဆို ကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်စွမ်းရှိကြပါတယ်။ ကြုံတွေ့လာရတဲ့ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းလည်းရှိကြပါတယ်။ ဇွဲလုံ့လရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရခြင်းဟာ ဘဝရဲ့ နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းမှုတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရှုမြင်မှုတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာပါ အောင်မြင်မှုတွေကို ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် စတင်လျှောက်လှမ်းတဲ့ ခြေလှမ်းတလှမ်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေကို ဇွဲလုံ့လရှိစေဖို့ သင်ကြားပေးခြင်းသည် လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်ဖြစ်အောင်သင်ကြားပေးမှဖြစ်မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အချို့သောကိစ္စမျိုးတွင် အောင်မြင်မှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းပေါင်းများစွာနဲ့ အကြိမ်ပေါင်းထောင်ချီ၊ သောင်းချီအောင် ကြိုးစားရတဲ့အနေအထားတွေ ကြုံတွေ့လာနိုင်တာမို့ ဇွဲလုံ့လကို လုံဝမလျော့လိုက်ဖို့၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်မဖြစ်ဖို့ လိုအပ်လို့ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကလေးငယ်တွေကို ပထမဆုံးအကြိမ်ကြိုးစားရုံနဲ့ အောင်မြင်ချင်မှာ အောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးကို သိနားလည်စေဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ အလိုဆန္ဒတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေသည် သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်ဆိုတာမျိုးကိုလည်း သိထားစေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဇွဲလုံ့လရှိစေဖို့အတွက် သင်ကြားပေးဖို့ရာ အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းကို ရှာတွေ့ဖို့ကလည်း မိဘတွေအတွက် မလွယ်ကူနိုင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ အသိပေးပြောကြားခြင်းများအပြင် ကလေးငယ်တွေကို လွတ်လပ်ခွင့်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်များနဲ့ အမှားကျူးလွန်ခွင့်တွေကိုလည်း ခွင့်ပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တခါတရံ သူတို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာလည်း ကူညီဖြေရှင်းပေးပြီး စိတ်ဓါတ်မကျဖို့၊ စိတ်ပျက်လက်ပျက်မဖြစ်ဖို့ကို နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို အပြစ်တင်တဲ့ အမူအရာများ၊ စကားလုံးများနဲ့ ဝေဖန်ပြောကြားပြီး တွန်းအားမပေးဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှသာ သူတို့ရဲ့ ကြိုးစားလိုစိတ်၊ ဇွဲလုံ့လရှိမှုနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေသည် ပိုမိုတိုးတက်လာမှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဇွဲလုံ့လရှိခြင်းသည် ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံဖြစ်ပြီး ငယ်စဉ်ကတည်းက အလေ့အထအဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Chit May May မှ ရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ ဆောင်းပါးများကို အခြားသော Media ၊ Website များနဲ့ facebook Page များမှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ကူးယူဖော်ပြခြင်းမပြုပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
Previous articleနို့တိုက်မေမေတွေ ဘာ့ကြောင့်ရင်သားတွဲကျလေ့ရှိသလဲ? ဘယ်လိုတားဆီးမလဲ?
Next articleတသီးတသန့်နေတတ်တဲ့ Introvert လေးတွေကို ဘယ်လိုပျိုးထောင်မလဲ?